Imigomo Yokusebenzisa -
Ukusetshenziswa kolwazi olunikeziwe kithi
Ukusetshenziswa kwesicelo senkampani kungaphansi kokuvumelana nemibandela nemibandela engezansi. Sicela ufunde imigomo nemibandela ngezansi ngokucophelela ngaphambi kokuvuma. Ngokuchofoza inkinobho yokwamukela, uyavuma ukuthi uboshiwe futhi uba yingxenye yalesi sivumelwano. Uma ungavumelani nanoma yimiphi imigomo nemibandela engezansi, ngomusa ungasebenzisi noma ufinyelele isicelo se-companyhub.
Imigomo Nemibandela ye-CompanyHub Application
I-CompanyHub Application, i-Software njenge-Platform yesevisi (i-SaaS) ephethe futhi iqhutshwa yi-CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd (ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi i-CompanyHub, We noma Yethu), inkampani efakwe ngaphansi kweNkampani Yomthetho 1956 nehhovisi layo elibhalisiwe eSanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, India - 422101. Ngokufinyelela nokusebenzisa uhlelo lweNkampaniHub yokuphathwa kwezokuthengisa kanye nezinsizakalo zokulandelela ukuthengisa (ndawonye "Izinsizakalo"), wena, umuntu noma inkampani enikezwa ilayisense elinganiselwe ukusebenzisa isicelo seNkampaniHub (ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi "wena" noma " "), Ngalokhu uyavuma ukuthi uboshiwe ngale migomo nemibandela, kanye nanoma yimiphi iminye imihlahlandlela, imithetho neminye eyengeziwe echazwe lapha (ngokubambisana," Imigomo ") futhi ukusetshenziswa noma ukutholakala okunjalo kuzokwenza isivumelwano phakathi kwakho neNkampaniHub.
Uma ukwamukelwa kwale migomo nemibandela futhi kuncike ekukhokhweni kokucutshungulwa okuvunyelwene ngakho, i-CompanyHub iyavuma ukukunikeza ilayisensi engalinganiselwe, engekho ekhethekile, engekho ephathekayo yokusebenzisa isicelo seNkampaniHub, ukufaka ipulaki yesiphequluli nokuvuma ngokwengeziwe ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezibhalwe lapha.
Uyavuma futhi uyaqonda ukuthi singaguqula ngezikhathi ezithile le Migomo, izici ezithile ze-CompanyHub isicelo kanye / noma izici ezithile zeMisebenzi, ngaphandle kwesaziso kanye nemigomo echitshiyelwe kanye nezinguquko ziphumelela ekuposeni isaziso sokuvuselela. Unesibopho kuphela sokuhlola le Migomo futhi ushintshe izaziso ngezikhathi ezithile ukuze kubuyekezwe. Noma yikuphi ukusetshenziswa kwesicelo seNkampaniHub ngemuva kokuthi lezo zibuyekezo zithunyelwe, kusho ukuvuma kwakho izinguquko.
I-CompanyHub ingabheka futhi ishintshe izici ezithile zeNkonzo zayo ngezikhathi ezithile kuya ku (1) zihambisana nanoma imiphi imithetho edingekayo, imithetho noma ezinye izicelo zikahulumeni; (2) ukusebenzisa isevisi ngokufanele noma ukuzivikela yona nabasebenzisi bayo. I-CompanyHub inelungelo lokuguqula, ukulahla noma ukuqeda noma yikuphi ukwaziswa okuhlala noma okudluliselwa kumaseva ayo ukuthi, ngokwengqondo yayo kuphela, ikholelwa ukuthi ayamukeleki noma iphula umthetho noma le Migomo.
Ngesicelo seNkampaniHub siyakusiza ekuqoqeni yonke idatha yakho ehlobene yokuthengisa endaweni eyodwa, yenza ukuhlaziya futhi udale imibiko ukukusiza ekwenzeni izinqumo zebhizinisi ezizwakalayo. Phezu kokubhaliswa nokuqinisekiswa kwe-Akhawunti yakho yakwa-Google, isicelo seNkampaniHub sizodonsa zonke izingxoxo zakho ze-imeyili ezinyangeni zokugcina ezingu-6 (eziyisithupha) kusukela ngosuku lokubhalisa. Uhlelo lokusebenza lwe-CompanyHub luzohlaziya ngokuzenzakalelayo okuqukethwe kwe-imeyili futhi luzokwenza uhlu lwabathintana obaluleke kakhulu. Ichazwe ngokucacile ukuthi lolu hlu lubonisa kuphela futhi aluphelele. Ukuze usebenze ngokuphumelelayo kwesicelo se-CompanyHub, Uzodinga ukwengeza amarekhodi oxhumana nabo, izinkampani kanye namadili ahlobene nalezi zinkampani.
Ngaphandle kokuphathwa kwezokuthengisa ngokusebenzisa isicelo seNkampaniHub, i-CompanyHub izohlinzeka ngezinsiza ezilandelayo
I-Plugin ye-Google Chrome Isiphequluli sokulandela imisebenzi ye-imeyili futhi inikeze imibiko yemisebenzi enjalo
Ilawula ukuthi wenze ngokwezifiso ukwabelana kwedatha nokugcina ubukhosi
Phakamisa ukulandelwa kokulandelana nabathintana nabo bamanje
Izikhumbuzo uma oxhumana nabo bengaphenduli i-imeyli kanye nemisebenzi yansuku zonke kanye nokulandelela njll
Izibuyekezo kuhlelo lokusebenza lweNkampaniHub
Zonke izingxoxo zocingo eziphakathi kwakho kanye nathi maqondana neMisebenzi zingabhalwa ngenhloso yangaphakathi yekhwalithi yangaphakathi futhi ngaleyo ndlela uyavuma ukuqapha nokuqopha okunjalo.
Uvumelekile ngokuqondile futhi ngeke:
Faka ukungena kwemininingo yedatha, ukukhipha, ukukhahlela, noma ukusebenzisa noma iyiphi inqubo noma izinqubo ezithumela imibuzo ezenzekelayo kuhlelo lweNkampaniHub.
Guqula, uvumelanise, uhumushe, noma uguqule unjiniyela noma iyiphi ingxenye yohlelo lokusebenza lwe-CompanyHub noma amasevisi.
Sebenzisa noma iyiphi i-robot, isicabucabu, isesho lokusesha / isicelo sokubuyisela, noma enye idivayisi ukuthola noma ukubeka noma iyiphi ingxenye yohlelo lokusebenza lwe-CompanyHub noma amasevisi.
Hlela kabusha noma uhlele noma iyiphi ingxenye yamakhasi wewebhu ayingxenye yesicelo seNkampaniHub noma amasevisi.
Sebenzisa le Iwebhusayithi noma Izinsizakalo, ngenhloso noma ngokungenhloso, ukwephula noma yikuphi umthetho wendawo, wesifunda, wezwe noma wamazwe omhlaba osebenzayo.
Thumela noma yikuphi amagciwane, izimpethu, iziphambeko, amahhashi weTrojan noma ezinye izinto eziyingozi.
Ngaphandle kwemingcele engenhla, uzoqinisekisa ukuthi:
Isicelo seNkampaniHub sisetshenziselwa ukulandelwa kwangaphakathi kokuthengisa ngawe noma inhlangano yakho
Ukufinyelela kwesicelo seNkampaniHub kuzonikezwa kuphela kubasebenzi bakho, abamele noma izinkontileka
Ngeke unikeze, noma ngenze wenze isicelo sohlelo lweNkampaniHub nganoma yiluphi uhlobo (kufaka phakathi ukwabelana ngeziqinisekiso zokufinyelela kuhlelo lokusebenza leNkampaniHub), lonke noma ingxenye (kufaka phakathi kodwa kungagcini ukwabelana ikhodi yento noma ikhodi yomthombo) kunoma yimuphi umuntu wesithathu ngaphandle kwemvume yethu ebhaliwe ngaphambilini
Akukho lutho oluqukethwe lapha luzobizwa ngokuthi lunikeze noma yiliphi ilayisense ngaphansi kwanoma yiliphi ilungelo lempahla yengqondo elinikezwe yona noma ilungelo lokusebenzisa isicelo seNkampaniHub noma olunye lwezinkonzo zethu ngaphandle kwalokhu okushiwo ngokucacile.
Amagama ezinkampani namagogo nazo zonke imikhiqizo ehlobene namasevisi, amamaki wokudizayinisa nama-slogans yizimpawu zokuhweba namamaki okusebenza asetshenziswa yiNkampaniHub futhi iyona yedwa impahla yeNkampani. Isicelo seNkampaniHub, ikhodi yomthombo, imiklamo kanye nezitayela ezisetshenziselwa ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zitholakala ku-CompanyHub.
Okunye ngaphandle kwelayisensi elinganiselwe yokusebenzisa isicelo seNkampaniHub njengoba sinikezwe ngokucacile lapha, kahle, isihloko kanye nesithakazelo kuwo wonke amalungelo empahla yengqondo, kufaka phakathi kodwa engagcini kunoma yiliphi ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba kanye nedatha yedatha, okufakwe ku-Service, kufaka phakathi okuqukethwe kulo kanye nokukhethwa kanye nokuhlelwa kwalo, kuzohlala njalo nathi. Akukho kule Migomo Nemibandela kanye / noma Isivumelwano kuhloswe ukudlulisa konke noma ingxenye yamalungelo.
Ngaphandle kokuba ilayisensi isebenzise isicelo seNkampaniHub, njengagunyaziwe ngaphansi kwale migomo, awunikwe ilungelo kunoma yiliphi ilungelo lobunikazi, uphawu lokuthengisa, ilungelo lobunikazi lenye impahla yengqondo kuhlelo lokusebenza lweNkampaniHub noma izinsizakalo, izinqubo noma ubuchwepheshe obuchazwe kuyo. Wonke amalungelo anjalo agcinwa yiNkampaniHub.
Wonke amalungelo, isihloko kanye nesithakazelo kufaka phakathi izimpawu zokuthengisa kanye namalungelo okukopisha ngokuphathelene negama lesizinda kanye ne-CompanyHub yesicelo esinikezwa ngeNkonzo zigcinwe ngeNkampaniHub. Ukungena okungagunyaziwe, ukukhiqizwa, ukubuyiswa kabusha, ukudluliselwa kanye / noma ukubhekana nanoma yiluphi ulwazi oluqukethwe kuhlelo lweNkampaniHub nganoma iyiphi enye indlela, noma yonke noma ingxenye, kuvunyelwe ngokuqinile, ukwehluleka ukuthi yisiphi isinyathelo esiqinile esingokomthetho esizoqaliswa kuwe.
Uzogcina wonke amalungelo, isihloko kanye nesithakazelo kudatha olufakwe kuwe kwisicelo seNkampaniHub. Uzogcina futhi wonke amalungelo, isihloko kanye nesithakazelo ekuhlaziyweni kanye nemibiko eyenziwe ngokusebenzisa uhlelo lweNkampaniHub.
Yonke imininingwane eyimfihlakalo, eyimfihlo noma eyakho okubonakalayo esinikezwe yona, noma ezuzwe nathi ngesikhathi sokuhlolwa kokuqala kwe-imeyili izogcinwa iyimfihlo ngaso sonke isikhathi njengoba inikezwe kuMgomo Wobumfihlo. Zonke iziphazamiso, izimpendulo, imibuzo, ukuphawula, iziphakamiso, imibono noma okunye okuthumele kithi kuzothathwa njengokungabonakali futhi kungabi yimfihlo.
I-CompanyHub izinikele ekuvikeleni ubumfihlo kanye nemfihlo yolwazi lwakho lomuntu siqu olungayicela futhi lithole kusuka kuwe. Ukuze ufunde isitatimende senqubomgomo yobumfihlo mayelana nolwazi olunjalo lomuntu siqu, sicela ubheke kithi INQUBOMGOMO YOBUMFIHLO.
I-CompanyHub ixhumana ngolwazi ngemuva kokuhlaziya idatha enikeziwe nguwe nedatha ekhishwe kuma-imeyili. I-CompanyHub ayikwazi ukulawula ukunemba kokuqukethwe, ubuqotho noma ikhwalithi yedatha enikeziwe nguwe, futhi isicelo seNkampaniHub singabandakanya ukungalungi kobuchwepheshe noma amaphutha we-typographical, futhi asiqinisekisi, futhi angeke sithweswe icala nganoma yikuphi ukungavumelani okunjalo, okufaka phakathi isicelo seNkampaniHub ubuqiniso, ikhwalithi, noma umthetho, noma noma yikuphi ukuhambisana kwemigomo yempahla, noma ukulahlekelwa noma ukulimala okubangelwa.
Ngakho-ke unikezwe iseluleko futhi uqaphele ukuthi lonke ulwazi olunikezwa nguwe lithathwa ngokukholwa okuhle, ngaphandle kokungenani ukusola ukuthi i-bonafides yolwazi neNkampaniHub ayiqinisekisi, ayivumeli, noma ayibhalisele izimangalo kanye nokumelelwa okwenziwe nguMkhangisi / s kubhalwe ngeNkampaniHub.
I-CompanyHub inelungelo, ngokuqonda kwalo kuphela futhi ngaphandle kwesibopho, ukwenza ngcono, noma ukulungisa noma yikuphi iphutha noma ukukhipha, noma iyiphi ingxenye yohlelo lokusebenza lwe-CompanyHub.
Izixhumanisi ezingosini zangaphandle ze-intanethi zinganikezwa ngaphakathi kokuqukethwe kwesicelo seNkampaniHub noma ezinye izinsizakalo njengendlela elula kuwe. Uhlu lwesayithi langaphandle alufaki ukugunyazwa kwesayithi yiNkampaniHub noma abambisene nabo. Uma uchofoza kumabhangisi omkhangisi, uxhaxha izixhumanisi, noma ezinye izixhumanisi zangaphandle kusuka kwiWebhu noma ezinye izinsizakalo, isiphequluli sakho singakuqondisa ngokuzenzakalelayo efasiteleni lesiphequluli elisha elingasetshenziswanga noma elawulwa yiNkampaniHub. I-CompanyHub ayinabo obhekene nanoma yikuphi okuqukethwe okuthunyelwe kumawebhusayithi wesithathu noma kuthatha noma yimiphi imithwalo yemfanelo ukuqinisekisa ukusebenza noma ukutholakala kwamawebhusayithi eqembu lesithathu. I-CompanyHub kanye nabathintekayo bayo abangekho obangela okuqukethwe, ukusebenza, ubuqiniso noma ukuphepha kwezobuchwepheshe zala masayithi angaphandle. Sigcina ilungelo lokukhubaza izixhumanisi ukuya noma kusuka kumasayithi wesithathu kuya kunoma yimiphi imisebenzi yethu, nakuba singaphansi kwesibopho sokwenza kanjalo.
I-CompanyHub iphinde inelungelo lokuphoqelela / ukuguqula imithetho yokufinyelela ye-CompanyHub Application, kungakhathaliseki ukuthi kufinyeleleka yini kwimali yokufinyelela, isikhathi, imishini, imikhawulo yokufinyelela noma okunye, okuzothunyelwa ngezikhathi ezithile ngaphansi kwalemigomo. Kuwumthwalo wabasebenzisi ukubhekisela kule migomo njalo ngesikhathi basebenzisa isevisi.
Siyavuma ukuthi Singumnikazi wesicelo se-CompanyHub, futhi sinelungelo negunya lokunikeza ilayisensi ukusebenzisa uhlelo lweNkampaniHub. Asivumeli, siqinisekise, samukela noma yisiphi isimo noma senza noma yisiphi isethulo sokuthi uhlelo lokusebenza lwe-CompanyHub luzohlangabezana nezidingo zakho noma ukuthi ukusetshenziswa kwe-CompanyHub kwesicelo ngeke kuphazamiseke noma kungabi namaphutha. Ayikho enye imininingwane ebhaliwe noma ebhaliwe ehlinzekwe ngu-Us uzodala iwaranti noma nganoma iyiphi indlela ukwandisa umthwalo wethu, futhi Ngeke uthembele kulolu lwazi.
Siphinde siqinisekise ukuthi isicelo seNkampaniHub asiphambani nanoma yiliphi ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba noma ilungelo lobunikazi lamanje elikhona futhi eliphoqeleka laseNdiya, futhi Sizokwenza kanjalo futhi sivume ukuzikhokhela futhi sikubambe Ungenabungozi ngokuqondene nokulahlekelwa, izindleko, umonakalo noma izindleko (kufaka phakathi izindleko zommeli nezindleko zenkantolo) ezivela kunoma yisiphi isimangalo, ukufuna noma isenzo sokuthi isicelo seNkampaniHub siphula noma siphambene nelungelo lobunikazi, uphawu lokuthengisa, ilungelo lobunikazi noma omunye umnikazi wezingcweti kuma-Indian, ngaphandle kokuthi Usondelene nathi ngesikhathi esifanele ukubambisana kwakho ngokugcwele ekulungiseleleni ukuvikela kunoma yiziphi izimangalo ezinjalo.
Noma yikuphi ukusetshenziswa kweNsizakalo, ukuthembela kunoma yisiphi isicelo se-CompanyHub, nanoma yisiphi ukusetshenziswa kwe-intanethi ngokuvamile kuyoba yingozi yakho kuphela. I-CompanyHub ihlonipha noma yimiphi imithwalo yemfanelo noma umthwalo wemfanelo wokunemba, okuqukethwe, ukuphelela, ukufaneleka, ukuthembeka, noma ukusebenza noma ukutholakala kolwazi noma impahla ekhonjiswe emiphumeleni / imibiko eyenziwe nge-Service.
Isicelo seNkampaniHub kanye nezinsizakalo zinikezwa ngesisekelo se-"As Is" nesithi "Kukhona" ngaphandle kwewaranti kwanoma yiluphi uhlobo, ngaphandle kokushiwo ngokucacile lapha, okungaboniswa noma okushiwo noma okusemthethweni, kufaka phakathi, kodwa kungagcini, iwaranti yokuthengisa, ukufaneleka komgomo othile, noma ukungenzi ukwephulwa. I-CompanyHub iyazivuma, ngokugcwele kakhulu evunyelwe ngaphansi komthetho, noma yimaphi ama-warranties mayelana nokuphepha, ukwethenjelwa, ukunemba nokusebenza kohlelo lwe-companyhub kanye nezinsizakalo. InkampaniHub ayivumeli ukuthi noma yikuphi ukukhubazeka noma amaphutha kuzolungiswa noma ukuthi okuqukethwe akukhululekile kwamagciwane noma ezinye izingxenye eziyingozi. I-CompanyHub iphinde ilahle noma yikuphi ukuqinisekiswa okuvunyelwe ngaphansi komthetho mayelana nanoma yiluphi ulwazi, izimpahla, noma izinsizakalo, ezitholakalayo, izikhangiso noma ezitholwa kunoma yiziphi izixhumanisi ezinikezwa noma ngokusebenzisa le nsizakalo.
InkampaniHub ayicabangi noma yimuphi umthwalo wezomthetho noma umthwalo wemfanelo wokunemba, ukuphelela noma ukuwusizo kwanoma yimiphi imibiko, ukuhlaziywa noma izinsizakalo ezinikezwe ngohlelo lweNkampaniHub. Ngeke kwenzeke ukuthi i-CompanyHub ibe nesibopho kuwe, ngenxa yokusebenzisa kwakho, ukusebenzisa kabi noma ukuthembela kuhlelo lokusebenza lweNkampaniHub noma ukusetshenziswa (noma ukungakwazi ukusebenzisa), ukuthembela noma ukusebenza kwanoma iyiphi insizakalo, nganoma yikuphi ukulimala, okubandakanya okuqondile, okukhethekile , ukulimala, okungaqondakali, okulimazayo noma okulimazayo okubangelwa ukulahlekelwa inzuzo, imali, ukusetshenziswa, noma idatha, kungakhathaliseki ukuthi kulethwe iwaranti, isivumelwano, ukuphulwa kwempahla yengqondo, ukuphazamiseka (kubandakanya ukungahloniphi) noma yimuphi omunye umbono, ngisho noma iNkampaniHub ingazi noma uceliwe ukuthi kungenzeka umonakalo onjalo ovela noma ohlangene nokusetshenziswa (noma ukungakwazi ukusebenzisa) noma ukusebenza kwesicelo seNkampaniHub noma isevisi.
Wena uthatha yonke imithwalo yemfanelo kanye nobungozi bokusetshenziswa kwesicelo seNkampaniHub kanye nensizakalo. Ukunciphisa okubalwe ngaphambili kuzosebenza noma ngabe yikuphi ukwehluleka kwenhloso ebalulekile yimuphi umkhawulo onqunyelwe futhi ngokugcwele ngokuvunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo. Uma kubanjwe ukuthi ukukhishwa noma ukukhawulelwa kwecala lokulimala okulandelanayo noma okungekho emthethweni akuphoqelekile, ezimweni ezinjalo, umthwalo wemfanelo uzobe ulinganiselwe ngokuphelele ngokuvunyelwe ngumthetho.
Uyavuma ukusihlomula futhi usiphathise thina kanye nezikhulu zethu, abaqondisi, ama-agent, nabasebenzi, abangenasici kunoma yisiphi isimangalo noma ukufunwa, okufaka izimali zommeli ezinengqondo, ezenziwe yinoma yimuphi umuntu wesithathu ngenxa yokuphulwa kwakho kwale migomo, ukuphulwa kwakho kwanoma yimuphi umthetho, noma ukwephulwa kwamalungelo omuntu wesithathu, kuhlanganise nokuphulwa kwakho kwanoma iyiphi impahla yengqondo noma elinye ilungelo lomuntu noma inhlangano.
Ithemu - Lemigomo izohlala isebenza ngokugcwele futhi isebenze kuze kube yilapho uqhubeka nokusebenzisa isicelo seNkampaniHub noma nanoma yimiphi imisebenzi ehlobene.
Ukungafinyeleli - Uma nganoma yisiphi isizathu inkantolo yamandla afanelekayo ithola noma yikuphi ukuhlinzekwa noma ingxenye yale Migomo yokungaqinisekisiwe, okusele kweMigomo kuzoqhubeka nokusebenza ngokugcwele.
Isivumelwano sonke - Le migomo yakha isivumelwano sonke phakathi kwethu futhi inqunywe futhi isuse konke ukuqonda noma izivumelwano zangaphambili noma zangesikhathi esifanayo, ezibhaliwe noma ezomlomo, ngokuphathelene nendaba yale migomo. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo koMisebenzi kuyoba ubufakazi obucacile bokuthi ukwamukelwa kwakho okuthathwa njengokwamukelwa kunoma yikuphi ukuguqulwa okwenziwe yile migomo.
Noma - Noma yikuphi ukuhoxiswa kwanoma yikuphi ukuhlinzekwa kweMigomo kuyosebenza kuphela uma kubhalwe futhi kusayinwe nguwe neNkampaniHub.
Isabelo - Awukwazi ukwabela noma yimaphi amalungelo akho noma imisebenzi ngaphansi kwalemigomo ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela kithi. InkampaniHub ingabela izibopho / imisebenzi kanye namalungelo ngaphansi kwale migomo ngaphandle kokufuna noma yimiphi imvume kuwe.
Izaziso - Zonke izaziso zethu, izidingo kanye nezinye izinto zokuxhumana kufanele kubhalwe phansi futhi kuyothathwa ukuthi zinikeziwe (a) uma zithunyelwe ngeposi ebhalisiwe, ukukhokhelwa kwe-postage, (b) uma zithunyelwa yi-courier ebusuku, (c) uma ithunyelwe yi-facsimile ukudluliselwa kanye nokudluliselwa okunjalo kuqinisekisiwe njengoba kutholiwe, noma (d) uma ithunyelwe ngeposi ye-elektroniki, futhi umyalezo onjalo uqinisekisiwe ukuthi uyamukelwe, kuleso simo kukheli, inombolo yefeksi noma ikheli le-imeyili elichazwe kwiWebhu. Zonke izaziso zakho, izidingo kanye nezinye zokuxhumana kufanele kubhalwe phansi futhi kuzothathwa ukuthi zinikeziwe (a) uma zithunyelwe ngeposi eqinisekisiwe, ukuthunyelwa okukhokhelwa ngaphambi kokukhokhelwa noma ukuthunyelwa yi-courier ebusuku, ekhelini lethu: CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd., iSanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, India - i-422101
I-force majeure - Akunakwenzeka ukuthi sizobekwa icala noma sibheke ukuthi siphule ngalokhu ngenxa yokuhluleka noma ukubambezeleka kokusebenza okuvela kunoma yisiphi isenzo sikahulumeni, umlilo, isishukhula, ukuvukela komhlaba, ukuzamazama komhlaba, ukwehluleka kwamandla, ukwehluleka kwenethiwekhi, ukuqhuma, ukuqhuma, ukuqhuma, ukushaya (kungakhathaliseki ukuthi kungokomthetho noma kungekho emthethweni), isenzo samaphekula, ukuhluleka komsebenzi noma ukulahlekelwa impahla, ukuphazanyiswa kwezokuthutha kwanoma yiluphi uhlobo noma ukunciphisa umsebenzi noma yimuphi omunye umbandela ongekho ngaphansi kokulawula kwethu.
Arbitration - Noma yikuphi ukuphikisana nokungafani okuvela mayelana nale Migomo kuzoxazululwa ngokuBambisana ngokuhambisana noMthetho WokuBambisana noConciliation, i-1996. Yonke inqubo izoqhutshwa ngolimi lwesiNgisi. Ngaphandle kokuthi amaCivumenti avumelane ngombambishela owodwa kuzakuba khona aba-Arbitrators abathathu, okuzokhethwa yiqembu ngalinye, kanti okwesithathu okumele ukhethwe ngabakwa-Arbitrators ababili abamiswe amaqembu. Indawo yokubambisana izoba eNasik, eNdiya. Noma yimuphi umklomelo owenziwe umlamuleli uzoba ophelele futhi ubophezele kulabo ababambe iqhaza kulokhu.
UMthetho Obusayo - Lemigomo izolawulwa futhi ilandwe ngokuhambisana nemithetho yaseNdiya futhi uyavuma ukuhambisa igunya elikhethekile lamakhotho aseNasik. Unesibopho sokuhambisana nemithetho esebenzayo. I-CompanyHub inelungelo lokufuna zonke izixazululo ezitholakalayo emthethweni kanye nokulingana ngokwephulwa kwalemigomo.
Ukuthintana nokuQinisekisa ukwazisa - Sicela uxhumane nathi nganoma yimiphi imibuzo mayelana nale migomo. Sicela ubike noma yikuphi ukuphulwa kweMigomo support@companyhub.com.
UKUSEBENZISA - UYAZI UKUFUNDA NOKUVUMELELA KONKE IZIMPAWU. UHLULEKILE UKUBALULEKILE UKUTHANDA UKUTHOLA IZINKONZO NGOKUSEBENZISWA KWE-COMPANYHUB KANYE AKUKHULULELE KUNYE OKUPHILISWA, UKUHLAWANA NOMA IZITATIMENDE KANYE NJENGOBA KUFANELE KUNYE NEMIBUZO.